Ukuphonononga iXiaomi Redmi Qaphela i7, umthengisi olandelayo ogqwesileyo ophantsi koqwalaselo | I-Androidsis
URafa Rodríguez Ballesteros | | Reviews, Xiaomi
Namhlanje sinayo uphononongo ekudala lulindelwe. Kwi-Androidsis siyifumene eyona nto ithengiswa kakhulu nguXiaomi, the Redmi Qaphela 7. Isiphelo esinexabiso sikwindawo ephakathi. Nangona ukuya kwinkcazo yayo kunokufumaneka kuluhlu oluphezulu.
Njengazo zonke izixhobo zeXiaomi, ubudlelwane obusekwe phakathi komgangatho nexabiso kunzima ukudibana. Kwaye emva kokuvavanya iNqaku elitsha leRedmi 7 kwiintsuku ezimbalwa, sinokuyiqinisekisa ngaphandle kwamathandabuzo. Ngoku unako thengisa kwintengiso yexesha elincinci ukusuka apha.
1 Inqaku leRedmi 7 lihlala lilindelwe
2 Imixholo yebhokisi
3 Iikhuphoni zezaphulelo
4 Uyilo kumgca wangoku kunye nezinto ezikufanelayo
5 Inqaku leRedmi 7 kwiindawo ezithile
5.1 Shiny iglasi umva
6 Isikrini seRedmi Qaphela 7
7 Sijonga ngaphakathi kweXiaomi Redmi Qaphela 7
8 Ikhamera yeRedmi Qaphela 7 ekuphakameni okuseleyo
9 Iifoto ezithathwe ngeXiaomi Redmi Qaphela 7
9.1 Ifoto yokuma komhlaba
9.2 Ifoto enokusondeza
9.3 Iinkcukacha zefoto
9.4 Ifoto yesiphumo somzobo
9.5 Ifoto eneflash
10 Ukusetyenziswa kwekhamera kwinqanaba le-MIUI 10
11 Ukuphunyezwa kokhuseleko okuphucula
12 Ibhetri ukuze ugcine ukugcina kunye nawe
13 Itheyibhile yokubalula ubuGcisa
14 Uluvo lomhleli
15 Uluvo lomhleli
Inqaku leRedmi 7 lihlala lilindelwe
Kumaxesha akutshanje kwenzeka rhoqo xa i-Xiaomi smartphone entsha ihlasela imarike. Ukwazi igama lenkampani yefashoni, ulindelo luphezulu xa kufikwa ekudibaneni nelungu elitsha losapho. Kunye noluhlu lweNqaku, enye yezona zinto zithengisiweyo kwaye zamkelwe kakuhle luluntu bezingazukuncipha.
Zisuka nje, singatsho ukuba iXiaomi Redmi Qaphela i-7 ayidanisi. Kodwa ngethamsanqa khange ikwazi kuphela ukungasiphoxi. Njengoko besilindele, sisixhobo ekuphakameni kwesiqinisekiso sokuqina. KUNYE impumelelo yayo yokuthengisa ingaphezulu kokudlula kwanabo bangaphambi kwayo.
Ngenxa yokuvela kwale nkampani kule minyaka mihlanu idlulileyo kwaye ndibone ukwamkelwa okukhoyo namhlanje ngabasebenzisi, namhlanje UXiaomi akasenayo into yokubonisa. Ngokulula kuba yiMi smartphone, siyazi ukuba iya kuba nemigangatho ekumgangatho ophezulu. Kwaye ngenkangeleko yomzimba ngokuhambelana neendlela zangoku. Le yile Redmi Qaphela i-7, ifowuni onokuyenza ngoku thenga ngesaphulelo Ixesha elilinganiselweyo.
Ukujonga ibhokisi yeXiami Redmi Qaphela i-7 esiyifumeneyo, ukongeza kwinto esinokuyilindela, ezinye iinkcukacha ezincinci. Sineziseko, oko kukuthi, ifowuni, intambo yedatha kunye netshaja. Sithanda ukuyifumana loo nto ucingo, kwaye ke isinxibelelanisi se-smartphone sinefayile ye- Uhlobo lwe-C lokufaka lwe-USB. Kubonakala ngathi uXiaomi ngokuqinisekileyo uthe ndlelantle kuwo onke amabakala ayo kwizibuko le-Micro USB kwaye leyo ingaphambili.
Sifumene into exhaphakileyo kwiiXiaomi ii-smartphones. A Umkhono we-silicone ohambelana neglavu kwaye ngenxa yokuba siqhelekile asiyeki ukubulela. Sisoloko sisithi yinto ekufuneka yenziwe ngamanye amafemu. Ukuba netyala ebhokisini zizinto ezimbini ezibalulekileyo, ukukhusela ifowuni yethu entsha kwasekuqaleni kunye nokuchitha imali encinci ukwenza.
Ukugqiba ukuthetha ngemixholo yebhokisi, asikuchasanga ukuyeka ukubiza ukungabikho. UXiaomi phantse kwasekuqaleni ukhethe, ngesizathu sokunciphisa iindleko, kuba ayibandakanyi iseti yentloko. Kuyinyani ukuba iifowuni zabo zihlala zitshiphu kuninzi lokhuphiswano lwabo. Nangona kunjalo, sikhetha ukufumana ii-headphone ngefowuni entsha.
Ukuba unomdla wokuthenga iXiaomi Redmi Qaphela i-7, ngoku ngenxa yokuba ngumlandeli we-Androidsis sinazo amatikiti esaphulelo ke unokuyifumana ngexabiso elihle.
Inguqulelo yesi-3 + 32GB yekhuphoni: GV32N7OOC $ 185.99 Thenga apha
Inguqulelo yesi-4 + 64GB yekhuphoni: X64Note7 $ 197.99 Thenga apha
Inguqulelo yesi-4 + 128GB yekhuphoni yeSaphulelo esiMnyama: 128RN7GL $ 206.99 Thenga apha
Inguqulelo yesi-4 + 128GB yekhuphoni yesaphulelo seBlue: RN7Global $ 235.99 Thenga apha
Ukuba unomdla kwezinye iimveliso zeXiaomi kunye neMISALE10 coupon uya kuba nesaphulelo se-10% kuzo zonke iimveliso onokuzifumana apha.
Uyilo kumgca wangoku kunye nezinto ezikufanelayo
Ngoku lixesha lokuthetha Inkangeleko ebonakalayo yeRedmi Qaphela 7. Ukuqala, kufuneka siphawule ukuba ngokusisusa kwibhokisi yaso siyayiqonda ukuba injalo I-smartphone ephathekayo. Babo iziphelo, njengoko siqhele, banjalo ngokugqwesileyo. Emva kweminyaka embalwa apho Ukugqitywa kwee-alloys zensimbi bathathe uninzi lwesiginitsha, ezi zinto bayekile ukuba kwifashoni. Kwaye siyangqina Ukudityaniswa kwezinto zangaphambili ezibuthathaka ngakumbi njengeglasi.
Umva wohlobo olutsha lweRedmi Qaphela i-7 igqityiwe kwiglasi, njengoninzi lweemodeli zamva nje zesambuku sabavelisi. Kodwa asizange sithande ukufumana iplastikhi kwisakhelo esijoyina ngaphambili nangasemva. Kuyacaca ukuba zithathwe kwiplastikhi ngenani lonyango kwaye zigqityiwe apho kusetyenziswa iitekhnoloji zakutshanje. Kodwa ekuqondeni kwethu kubonakala ngathi kukho intwana yodidi oluseleyo kwaye sele ibonakala ingaprintwanga.
Xa sele sithethile ukuba iplastiki, njengezinto ezibonakalayo, ayibonakali kuthi njengeyona "phezulu", kufuneka sivume inkangeleko ebonisa iyonke inomdla ngokwenene. Imodeli yovavanyo esiyifumene kuyo Umbala omnyama okhazimlayo umhle kakhulu, kwaye inikezela ngenkangeleko ebengezelayo. Nangona kunemibala eqaqambileyo emnyama, umphezulu wangasemva uya kwenza umboniso obalaseleyo weminwe.
Inqaku leRedmi 7 kwiindawo ezithile
Enye yezinto ezibonakalayo kwesi sixhobo kwifayile ye- isikrini esikhulu ngokubaluleka kwayo emzimbeni onokubancinci. Inefayile ye- 6,3 intshi ediagonal apho sifumana i- inotshi encinci emise okwehla apho kugcinwe khona ikhamera ye-selfie. Isikrini sinayo Isisombululo esipheleleyo se-HD + kwaye kugqityiwe ngayo 2.5 iglasi egobile eyenza ukudityaniswa kwayo nomzimba wefowuni ulunge kakhulu. Kwaye ikwaqaqambisa ukukhusela iphaneli yangaphambili ngeGorilla Glass 5.
Ukuba ujonga ezantsi, sifumana kumbindi wokungena Uhlobo C lwe-USB. Kwaye siyijikelezile, kwisiphelo ngasinye sifumana i-grooves apho ikhoyo isithethi kunye nemakrofoni. Isisombululo esilinganayo esijongeka silungile kwaye sinika isixhobo ukuvumelana ngakumbi ekuphelisweni kwayo.
Ukuzimasa phezulu yeRedmi Qaphela i-7 siyifumana siyintoni na isimanga esihle. Sibona indlela eye ngayo Igalelo le-jack eyi-3.5mm yee-headphone. Ubungqina obucacileyo bokuba kunjalo isebenzisane ngokupheleleyo nohlobo C lwe-USB. Kwaye ukufakwa kwesona sixhobo sokutshaja sikwanamhlanje akufuneki kube sisizathu, okanye endaweni yoko kube sisizathu sokuphelisa.
Kwakhona phezulu sifumana izibuko le-infrared ukuba abavelisi abaninzi abaziwa kwiminyaka edlulileyo. Enye enye eyongezelelweyo enika iNqaku 7 ngezixhobo ezinkulu, ezinje ngolawulo olukude. Esikwazileyo ukuvavanya ngesicelo sethu kwaye sisebenza ngokugqibeleleyo nangomabonakude angengawo amva nje.
Kwi Icala Elilungile Kukho amaqhosha e ulawulo lwevolumu. Kwaye ngezantsi kwe- iqhosha on / off kunye nokukhiya. Ukujonga kwi icale lasekhohlo i slot amakhadi. Kuyo sinokufaka ngaxeshanye amakhadi amabini eNano SIM, okanye enye iNano SIM enememori khadi ye-Micro SD.
Cofa apha kwaye uthenge iXiaomi Redmi Qaphela i-7 ngesaphulelo se-17%
Shiny iglasi umva
I-Redmi Qaphela i-7 igqityiwe ngasemva kuyo iglasi egudileyo leyo ibonakala ngokugqitywa kwayo. Nangona kwisiphelo sifunyenwe, ngombala omnyama asixatyiswanga. Eminye imibala ifumaneka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu, une-gradient encinci ukusuka phezulu kuye ezantsi Ndigqibe kakuhle kwaye ndiziva ndonwabile.
Ngasemva kweRedmi Qaphela 7 siyifumana ikhamera yokufota. Ikhamera emibini edibanisa ilensi ye I-48 Mpx kunye ne-5 Mpx esiza kuthetha ngayo ngokulandelayo. Iilensi ezicwangciswe ngokuthe nkqo kwaye zibekwe kwinxalenye ephezulu yasekhohlo ngasemva. Ngaphantsi kwayo sifumana isibane se-LED esinamandla.
Embindini wenxalenye yayo yangasemva ibekwe umfundi weminwe. Reader ebekwe kweyona ndawo ifanelekileyo ukuze ifundwe kakuhle ngaphandle kokunyanzela ukubekwa kwesandla xa sibambe ifowuni.
Isikrini seRedmi Qaphela 7
Ixesha lifikile lokuba ujonge kwiscreen seRedmi Qaphela 7. Kwaye siyabona ukuba uXiaomi, elandela umgca wabo bonke abavelisi, enza ukuba isikrini sayo siqhubeke sikhula. Ngokukodwa, sifumana isikrini esinefayile ye- 6,3 intshi ediagonal. Ukunikezela ngesisombululo se Iiphikseli ezingama-1080 x 2340 nge-intshi nganye, yiyo FHD +. Isikrini esigqibezele ngokugqwesileyo ngenxa yeglasi ye-2.5D ejikeleziweyo.
Sibona indlela isikrini esifumana ngayo kakhulu Ipesenti elungileyo yokuhlala iphaneli efikelela kuma-81%. Kwinxalenye yayo engaphambili, iXiaomi inike iNqaku 7 encinci inotshi emile okwehla, nangona kungcono ukujikeleza kule meko. Ngaphakathi kuyo sijonga ikhamera yangaphambili. Nangona, ukongeza kwinotshi kunye nenqanaba elifanelekileyo lomsebenzi wekhusi kuyabonakala umda omnyama omnyama uyijikelezile, into ebonakala ingcono nangakumbi.
Malunga nenotshi ukusuka phezulu, yithi inkqubo yokusebenza, kule meko I-MIUI 10, ilungiselelwe ngokugqibeleleyo ngokudityaniswa kwayo. Kakhulu ke, enkosi kuye Sinokukhetha nokuzimela inotshi kwaye indawo ephezulu ijongeka imnyama bhuqe. Into eya kuthi, nangona kunjalo, ihambe ngokuchasene nokusetyenziswa okuphezulu kwescreen.
Enye inkcukacha esiyithandayo kukufumana encinci I-LED yezaziso. Ukongezwa ukuba abaninzi abavelisi bayalibala. Kodwa yenza ukusetyenziswa kwayo kube lula kakhulu kuthi kwaye xa siyifumana siyathanda ukubulela. Njengoko sibona, icandelo elikwisikrini elifumana amanqaku amahle kakhulu, kwaye ayisiyiyo kuphela.
Sijonga ngaphakathi kweXiaomi Redmi Qaphela 7
Ukuba sijonga oko iXiaomi Redmi Qaphela i-7 izisa ngaphakathi sibona ukuba inqaku liyaqhubeka njani ukunyuka. Siphambi komnxeba ohamba njengamanzi esenza nawuphi na umsebenzi. Uninzi lwezityholo lubangelwa Umsebenzi omangalisayo wokusebenza owenziwa nguXiaomi nge-MIUI. Kodwa iprosesa yayo ikwanoxanduva lokuziphatha okunika amava anelisayo.
Inqaku lesi-7 lihambisa umbulelo kwi-chip enobuninzi be-solvency, i Qualcomm Snapdragon 660. Inkqubo Octa Core ebaleka ngaphezulu kwe- 2.2 GHz yoyilo lwe 64 Bits. Iprosesa eyenza iifemu ezinjengeNokia, Oppo okanye iSamsung ithembele kwiimodeli zazo zamva nje kuluhlu olufanayo. Chip kwiRedmi Qaphela i-7 idibanisa ngokugqibeleleyo kunye Ikhadi lemifanekiso njenge Adreno 512, ngokungathandabuzekiyo i-tandem engenakusilela, njengoko sibonile.
Ukujonga kwimemori yakhe, sifumana 4GB RAM. Ipakishwe ngomthamo we Ukugcinwa kwangaphakathi kwe64GB esinokuyandisa ngaphandle kweengxaki ngekhadi le-Micro SD. Kukho kwakhona inguqulelo ukubonelela ngokudityaniswa I-3 GB + 32 GB. Omabini la mathuba anokubakho ngokusebenza kakuhle.
Ikhamera yeRedmi Qaphela 7 ekuphakameni okuseleyo
Siyazi ukuba ikhamera yile yenye yezona zinto zibalulekileyo xa usenza isigqibo kwenye okanye kwenye i-smartphone. Le yinto eyaziwa nangabavelisi. Kodwa abanye bathathe amacebo aphumelele ngakumbi kunabanye, kwaye iXiaomi ibonakala ichanekile ngokupheleleyo ekubheja kwisenzi esisayinwe yiSamsung kwicandelo lokufota.
Sele kuyiminyaka embalwa okoko iifowuni ezenziwe ngamaTshayina zikwazile ukuphalaza ibala lokuba neekhamera ezisemgangathweni. UXiaomi ngomnye wabo basebenze kakhulu ekwenzeni le ngxelo ingasasebenzi. Kule nto, iyayazi indlela yokubheja kwabanye abavelisi abanamava ngakumbi ebaleni.
KwiNqaku leRedmi 7 sifumana isivamvo Samsung S5KGM1. Isivamvo Uhlobo lwe-ISOCELL nge ukuvula ekujoliswe kuko f / 1.8. Intsha ngokuthe kratya kwintengiso kodwa uninzi lweefemu esele zinomdla kuzo. Ngokukodwa, kwikhamera yangemva sifumana isivamvo esidibanisa iilensi ezimbini. Eyona iphambili, ngesisombululo se 48 Mpx, kunye neelensi yesibini enesisombululo se 5 Mpx. Inye indibaniselwano ebonelela ngeziphumo ezilungileyo ngokwenene.
Ngokubonakalayo ikhamera ikhona ngasentla ngasekhohlo ukusuka ngasemva. Iilensi zicwangciswe ngokuthe nkqo ngaphezulu kwenye. Ngaphantsi kwezi sifumana ukukhanya kwe-LED kabini isebenza ngokufanelekileyo kwiimeko zokukhanya eziphantsi. Ikhamera engahambisi kuphela. Iyakwazi ukubonelela ngeziphumo ezilungileyo kwaye sinokuqonda ngemizekelo ethile.
Kulo ikhamera yangaphambili yefoto kwii-selfies uXiaomi khange akhangele kwimithombo yeendaba nokuba. Kule meko sine Inzwa ye-13 Mpx sikwazi ukwenza "iifoto zethu" zikwinqanaba elilungileyo. Sikwanayo isoftware ekhethekileyo ukuze sikwazi ukuthatha ezona zithombe zeqela zibalaseleyo ngekhamera yangaphambili yeRedmi Qaphela 7. Ukuba ujonge i-smartphone apho ikhamera yakho ingumlinganiswa ophambili, eli lixesha lakho, kwaye ngokunqakraza apha ungayifumana ngesaphulelo esinomdla.
Iifoto ezithathwe ngeXiaomi Redmi Qaphela 7
Zininzi iifoto esikhe sazithatha ngeRedmi Qaphela entsha 7. Kwaye kufuneka sitsho Iziphumo ezifunyenweyo bezingaphaya kokwanelisa. Siphambi kwekhamera oko Isebenza kakuhle kuyo nayiphi na imeko. Ukwazi ixabiso esinokufumana ngalo esi sixhobo, zimbalwa okanye akukho zingxaki, sinokubeka into enokuthi isinike yona ikhamera yakho.
Ifoto yokuma komhlaba
Kwifoto ethathwe ngemini enamafu sibona indlela ikhamera yeRedmi Qaphela i7 ikwazi ukusibonisa ngokucacileyo umbala opheleleyo we-gamut. I imibala yinyani ebomini kwaye singazichonga kakuhle izinto zomfanekiso. Nangona ingxolo ityibilika kugxilwe, ngokubanzi, inikwe iimeko zokukhanya, ukubanjwa kufikelela kwinqanaba elifanelekileyo.
Ukutshona kwelanga kuhlala kunzima ukubamba ngokukhomba ngqo kumthombo wokukhanya, kule meko ilanga. Ngamafu asebenza njengesikrini, sinethamsanqa lokufumana ukukhanya okukhulu. Kulo mfanekiso sisebenzise ukusondeza kwidijithali ukuya kuthi ga kwelona liphezulu yekhamera yeRedmi Qaphela i-7. Ukuphulukana nobukhali kunye nenkcazo inokubambeka, into eqhelekileyo ngokusondeza kwidijithali, ngokudubula sichonga ngokugqibeleleyo onke amanqaku eziza kuvela. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngolu sondiso sinokuthatha iifoto ezifanelekileyo kakhulu.
Kwifoto ekufutshane nento, ngaphakathi kunye nokukhanya okungeyonyani, Iziphumo ezifunyenweyo zikwanazo Iziphumo ezilungileyo kakhulu. Singajonga i iinkcukacha eziphezulu enikezela ngolwazi oluchanekileyo ngemibala kunye neemilo. Inkcazo ephunyeziweyo, nokuba ikukukhanya okukhulu, isimangalisile.
Ifoto yesiphumo somzobo
Enye yezona zinto zifunwa kakhulu kwiXiaomi Redmi Qaphela 7, enkosi kwikhamera yayo ezimbini. Ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo ngale ndlela yokufota, kuya kufuneka sihlangabezane nezona mfuno zisezantsi esiziboniswa sisicelo sekhamera. Asinakusondela kakhulu kwithagethi, nangaphezulu kweemitha ezimbini. Kumgama ofanelekileyo sibona indlela umbala ongasemva ubalaselisa umfanekiso weziko ukudala ukubamba okunomtsalane kwiliso. Iziphumo ezifezekiswe kakuhle, kodwa njengoko sisitsho, ngokusikelwa umda.
Iziphumo zafezekiswa ngenxa ukukhanya kwe-LED kabini Kubengcono kakhulu kunokuba bekulindelwe. Sikwazile ukuvavanya ii-smartphones ezinokukhanya kwazo kuba kufanelekile. Akunjalo. Kwigumbi elingenakho ukukhanya kwendalo kunye nokukhanya okungalunganga kakhulu, ukukhanya kweRedmi Qaphela i-7 uyakwazi ukukhanyisa imiboniso okanye izinto ukufezekisa iziphumo zendalo.
Ukusetyenziswa kwekhamera kwinqanaba le-MIUI 10
Sele sithethile ngamanye amaxesha kwi-Androidsis Singabalandeli beyona Android inyulu inokwenzeka. Kodwa ukuba kuye kwafuneka sinamathele kwezinye zezona zinto zisetyenzisiweyo zisetyenziswayo MIUI ingangokhethiweyo. Kwaye iya kuba yeyama ukuziqhelanisa nohlobo ngalunye lwe-Android kunye nokutshintsha kwesandla neNkqubo yokuSebenza esekwe kuyo.
Ke ngoko, ukuba sithetha ngokusetyenziswa kwekhamera yakho, sinokuthi kwinqanaba labanye. Sifumene isicelo ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Nge a "Ukusebenziseka" kunye nokubakho koqwalaselo Intuitive kwaye iyafikeleleka. Iingcali zokufota kunye nabo banolawulo oluncinci baya kukufumanisa kulula ukumisela ikhamera ngendlela abayithandayo.
Sifumana ukhetho lwe ividiyo emfutshane, ividiyo, ifoto (eqhelekileyo), ifoto yomfanekiso, imo yasebusuku, ipanorama kunye nezinye ezingakumbi. Nangona ukusetyenziswa kwale khamera kubonakala ngaphandle, kungenxa yesoftware enayo. Enkosi kakhulu ukudityaniswa kweArtificial Intelligence, Ikhamera yeXiaomi Redmi Qaphela i-7 iyakwazi ukubona imeko kwaye inike ezona zicwangciso zifanelekileyo zokufumana ezona ziphumo zibalaseleyo.
Uncedo olongezelelekileyo oluya kuqinisekisa ukuba ukubanjwa kwethu, ukongeza ekubeni nenkxaso yobuchwephesha esemgangathweni, kuthathwa kweyona meko intle. Ngale ndlela siyaqinisekisa, ngaphandle komzamo, ukuba sithatha iifoto ngeyona nkxaso ibalaseleyo sinokuba nayo. Amava amnandi kangangokuba ukuba uyazama awusayi kuphinda ufune ukuwenza ungasebenzi.
Ukuphunyezwa kokhuseleko okuphucula
Kwiifemu ezinje ngeXiaomi sizilinga ngemodeli nganye entsha indaleko yetekhnoloji esetyenziselwa ukufumana okona kungcono kwiselula yethu. Sibona indlela, umzekelo, itekhnoloji ye ukuqaphela ubuso khange isetyenziswe ngaphambi kwexesha. Kwaye emva kokuyisebenzisa kungekudala kwizixhobo zabo, a ukusebenza ngokugqibeleleyo yolu hlobo lokhuseleko.
Sikwazile ukuvavanya iitheminali ze-Androidsis eziqhayisa ngokuba nokhuseleko ngokubonwa kobuso, kwaye oko bekungathembeki kakhulu, ukutsho nje okuncinci. Iifowuni ezingavula iimvavanyo ezi-2 kwezi-3 zobuso babantu abangagunyaziswanga.
Kungenxa yoko le nto uXiaomi eqinisekisile ukuba ukubonwa kobuso kusebenza ngokufanelekileyo ngaphambi kokuphumeza izixhobo zayo ngale teknoloji. Kwaye emva kokuyivavanya, sinokuqinisekisa ukuba isebenza kakuhle kakhulu. Ngumntu ogunyazisiweyo kuphela okwazile ukuvula isixhobo, kwaye ivula ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe.
Sikwanemva kunye neklasikhi esele ikho umfundi weminwe. Kufuneka sitsho izinto ezimbini ezibalulekileyo ngaye. Ngokoluvo lwethu, ikwindawo ezintle. Nge-smarpthone ebanjwe ngesandla, ifikelelwa ngokwendalo ngaphandle kokucinezela ukuma. Kwaye, ukusebenza kwayo kuyakhawuleza kwaye kuyasebenza. Akukho nkcaso kule nto.
Ibhetri ukuze ugcine ukugcina kunye nawe
Ibhetri yinto ebalulekileyo esoloko siyithathela ingqalelo xa uthelekisa iifowuni ezisithandayo. Kukho abasebenzisi abakhetha ukukhetha ibhetri ebalulekileyo, bebeka phambili le meko ngaphezulu kokubonakala komzimba. Nokuba ubungakanani obuphezulu kakhulu. Kwaye kukho nabanye abasebenzisi abalahla i-smartphone encinci kwaye inzima kangako.
Nangona kunjalo, zombini iiprofayili zomsebenzisi zikhetha obona bomi bebhetri bude kwi-smartphone. Ukuzimela kwee-smartphones kumiselwe ngumthamo weebhetri zabo. Kodwa njengoko sisazi, Umsebenzi wokusebenza phakathi kwawo onke amacandelo endlela ikwadlala indima ebalulekileyo ukuze inkululeko ikwazi ukolula.
KwiNqaku leRedmi 7 sifumana I-4.000 mAh ibhetri. Umthwalo osele ukodlula uninzi lwabakhuphiswano bawo ngqo. Kodwa sithathela ingqalelo ukusebenza kakuhle kwamandla anale Xiaomi, ukuzimela kukhulu ngakumbi. Intsimi apho iXiaomi ihamba kakuhle kwaye ikwazi ukuyibonisa ngalo lonke ixesha sinethamsanqa lokuvavanya enye yezixhobo zayo.
Nangona iRedmi Qaphela i-7 ingenayo itekhnoloji yokutshaja ngaphandle kwamacingo, kulungile ukwazi oko itshaja yayo inexabiso elikhawulezayo le-18w. Ngethuba elifutshane kakhulu siya kuba nakho ukwenza ukuba i-smartphone yethu ihlawuliswe ngokupheleleyo kwaye ifumaneke. Inyani ebalulekileyo yokwazi ukuba kusetyenziswa kakhulu uyakwazi ukuhlala phantse iintsuku ezimbini. Ifowuni eya kuthi iqhubeke nathi ngaphandle kwamandla kwaye inokuba yeyakho ngokunqakraza apha ngesaphulelo ongenakukuphosa.
Itheyibhile yokubalula ubuGcisa
Umzekelo Redmi Qaphela 7
Inkqubo IQualcomm Snapdragon 660 OctaCore 2.2 GHz
Imemori ye-RAM 4 GB
Ukugcina 64 GB
Imemori khadi yememori I-Micro SD
Ikhamera engasemva ezimbini ezingama-48 + 5 Mpx kunye ne-AI
flash ezimbini ze-LED
Ikhamera yeSelfie 13 Mpx
Umfundi weminwe SI
Ukuqwalaselwa kobuso SI
Ibhetri 4000 mah
Inkqubo yokusebenza Android 9
Uluhlu lomntu MIUI 10
Ubukhulu 75.2 x 152.9 x 8.1
U bunzima 186 g
Unxibelelwano lokuthenga kunye nokunyusa isaphulelo Xiaomi Redmi Qaphela i7
Emva kovavanyo olucokisekileyo lweXiaomi's Redmi Qaphela i-7 sinokuqinisekisa ukuba isandla sokuqala kukho imizekelo embalwa yexabiso elilinganiselweyo lemali. Zimbalwa okanye akukho ziphantsi sinokuthi sibeke ismartthone ethi, kuluhlu lwayo, inikezele kakhulu ngento encinci. Ngaba ungacinga ngesinye iselfowuni esinezi mpawu ngeli xabiso? Ukuba umntu ukubuza ingcebiso ukuze ubambe i-smartphone esemgangathweni ngexabiso elifikelelekayo ungathandabuzi, Xiaomi Redmi Qaphela 7.
El imbonakalo yomzimba Inqaku leRedmi 7 lifezekiswe kakuhle ngenxa yokhetho lwezixhobo zokwakha kunye nesitayile esifundwe kakuhle.
El ubungakanani bescreen Kubonakala ngathi yimpumelelo kuthi. Umzobo we 6,3 intshi kumzimba omncinci kangaka kukuqhubela phambili okonwabela kakhulu.
La I-4.000 mAh ibhetri kunye nexesha elibonelelayo liyenza ukuba ifumane amanqaku ngakumbi nangaphezulu kwabo bakhuphisana nabo ngokuthe ngqo.
La Ifoto yekhamera yimpumelelo eqinisekisiweyo. Iziphumo, indlela abaziphethe ngayo kunye nokubala kwabo kunye neArtificial Intelligence zimenza abe kwinqanaba eliphezulu.
Ukubonakala komzimba kunye nolwakhiwo oluhambelanayo
Ubungakanani besikrini esihle
Ukuzimela kunye namandla ebhetri
Ukucinga ukuba sinesikrini esihle sobungakanani ngesisombululo esihle kakhulu, Ukuqaqamba okubonayo kunokuba mfutshane kancinci. Ngokukodwa kwiimeko zokucaca kwendalo.
ukuba Asinayo kule smartphone ngokutshaja ngaphandle kwamacingo Yenye yee-buts ezimbalwa esinokuthi sizibeke kwi-smartphone enokhuphiswano.
Ngamanye amaxesha ukukhanya kwesikrini okungalunganga
Akukho zibiza ngaphandle kwamacingo
Xiaomi Redmi Qaphela i7
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Ukujonga kwakhona iXiaomi Redmi Qaphela 7
Isamsung irhoxisa umcimbi weGlass Fold eSpain